Sleep – Healthy Life Journal
နေ့စဉ် ရှစ်နာရီထက်ပိုပြီး အိပ်စက်သူတို့ ဖြစ်တတ်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အရွယ်ရောက်သူတိုင်း တစ်ညမှာ အချိန် ၇-၈ နာရီအိပ်ချိန်ပေးသင့်တယ်ဆိုတာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံလိုက်နာသူတိုင်း သိကြပါတယ်။ အိပ်ချိန်နည်းလွန်းရင် ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်တော်သလို ရှစ်နာရီထက်ပိုအိပ်တာကလည်း ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြန်ပါတယ်။ နေ့စဉ် အချိန်ရှစ်နာရီထက်ပိုပြီး အိပ်စက်ချိန်ပေးသူတွေအနေနဲ့ အောက်ပါကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာ...
အိပ်တဲ့အခါ ဘာကြောင့် သွားရည်ကျရတာလဲ သွားရည်မကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကနေ တံတွေးအပိုတွေ ထွက်ကျလာတဲ့အခြေအနေကို သွားရည်ကျတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်သူတချို့မှာ အိပ်စက်အနားယူတဲ့အခါ သွားရည်ကျတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် သွားရည်ကျရတာလဲ အိပ်တဲ့အချိန်မှာ မျက်နှာကြွက်သားတွေနဲ့ မျိုချတုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်က လုံးဝပြေလျော့အနားရနေပါတယ်။ အိပ်စက်အနားယူစဉ်မှာ ခံတွင်းထဲ တံတွေးတွေ စုပြုံရောက်ရှိရာက အနားရနေတဲ့...
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. ကားထဲအဲကွန်းဖွင့်ပြီး အိပ်စက်တာက ကျန်းမာ ရေးအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိပါသလဲဆရာ။ A. ကားကိုအလုံပိတ်ပြီး အဲကွန်းဖွင့်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်ပိုင်းပြောရပါမယ်။ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း ကားမောင်းရင်းနဲ့ အိပ်ငိုက်နေတယ်၊ အဲဒီလိုအိပ်ငိုက်တဲ့အချိန်မှာ ငိုက်ရင်းနဲ့ ကားမမောင်းသင့်ပါဘူး။ ငိုက်ရင်းကားမောင်းရာက ယာဉ်မှောက်တာ၊...
အချိန် နှစ်မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်သွားစေရမယ်…
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အိပ်မပျော်တာက ဒီနေ့ခေတ်လူတွေကြားမှာ စိတ်ဖိစီးမှု၊ တစ်နေ့တာ နေထိုင်စားသောက်ပုံမမှန်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုမကောင်းခြင်း စတာတွေကြောင့် အတွေ့ရများတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ပါ။ အိပ်မပျော်တဲ့ သူတွေကြားမှာ အိပ်ခန်းအေးအောင်ထားတာ၊ အိပ်ခန်းကိုမှောင်ပြီး တိတ်ဆိတ်အောင်ထားတာ ဒါတွေကလည်း သိပ်အသုံးမဝင်လှပါဘူး။ အမေရိကန်လူမျိုးတွေကတော့ အချိန်နှစ်မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းကို...
သင့်မှာ အိပ်စက်မှုအကြွေး ဘယ်လောက်ရှိသလဲ
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နေ့ခင်းမှာ သင်ဘယ်လောက်အိပ်သလဲ၊ ဘယ်လို အိပ်ငိုက်သလဲဆိုတာသိအောင် အောက်ပါအခြေအနေတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ ဒီအခြေအနေတွေက သင်အိပ်ရေးဝသလား၊ အိပ်ဖို့ လိုအပ်နေသလားစတာတွေကို သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ထိုင်ခြင်းနှင့် စာဖတ်စဉ် အိပ်ငိုက်ခြင်း – လုံးဝ မဖြစ်ပါ...
အော်ပရာဝင်းဖရေး၏ အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ ဆရာဝန်က စစ်မှန်သောအိပ်စက်နည်း အမူအကျင့်များမျှဝေ
၊ ကိုထက် ၊ အိပ်စက်မှုပြဿနာကို ခံစားနေရသူတွေအတွက် အော်ပရာဝင်းဖရေးရဲ့ အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ ဆရာဝန် Dr Michael ကအခုလို လမ်းညွှန်ချက်တွေ မျှဝေထားပါတယ်။ သြစတြေးလျလူမျိုး ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းက နေ့ဘက်မှာ စိတ်နဲ့ ကိုယ်ဖြေလျှော့မှုတွေမလုပ်တာကြောင့် ညဘက်မှာ အိပ်မပျော်တဲ့ ဝေဒနာ...
ဒေါက်တာစောဝင်း (ကလေးကျန်းမာရေး) မေး. အိပ်ပျော်စဉ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်တဲ့ ရောဂါအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. ဒီရောဂါက အိပ်မောကျနေတဲ့အချိန်မှာ လည်ပင်းတစ်လျှောက် ကြွက်သားတွေ ပျော့ကျသွားပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်း “ပိတ်” ပိတ်သွားတတ်တဲ့ ရောဂါပါ။ ဒီရောဂါက ဒီလောက်အဖြစ်မများလှပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း ပိုပြီး...
အိပ်ရင်း ဟောက်တတ်သူတို့အတွက် သဘာဝ အိမ်တွင်းကုထုံးများ
– မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ ဟောက်သံကျယ်ကျယ်ကြောင့် အိပ်မရဖြစ်နေပြီလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကဟောက်သံကျယ်ကျယ်ထွက်တတ်လို့ တခြားအိမ်တွေမှာအိပ်ဖို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေသလား။ အိပ်ရင်းဟောက်တာက အိပ်မပျော်တာကိုဖြစ်စေသလို အိပ်စက်တဲ့စနစ်ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ရင်းဟောက်တာကို သက်သာလျော့ပါးစေမယ့် အိမ်တွင်းသဘာဝနည်းတွေကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ (၁) ပူစီနံဆီသုံးကြည့်ပါ လူတစ်ယောက်က...
ညည အိပ်ရင်းလန့်နိုးနေသလား . . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အိပ်ပျော်နေရာကနေ ညသန်းခေါင်ချိန်မှာ ရုတ်တရက် လန့်နိုးလာပါသလား။ ညည အိပ်ရင်း မိုးမလင်းသေးဘဲ လန့်နိုးလာတာကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပါသလား။ ညဘက်အိပ်ရင်း လန့်နိုးတဲ့အခါ ပြန်အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အတွက် လန့်နိုးစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သိနားလည်ပြီး ဆင်ခြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။...